Isibongozo somphefumlo Inombolo ye-9 | Fumanisa Intsingiselo - Inzululwazi Ngamanani
Ngaba uyazi ukuba umphefumlo wakho unqwenela ngaphezu kwayo nantoni na kweli hlabathi? Okanye yintoni ekhuthaza zonke izigqibo ezibalulekileyo owakhe wazenza? Ungakhathazeki ukuba awuyazi.I-Numerologyinokukunceda ukuba udibane nomnqweno wakho womphefumlo.
Isebenza njani i-numerology?
Kukho unxibelelwano olungaqondakaliyo phakathi kwemathematika kunye nolandelelwano kwiNdalo yethu iphela.
Ingcali yezibalo yamaGrike I-Pythagoras wayekholelwa ukuba yonke into, nkqu noThixo, wayenokuchazwa njengenani. Wayefuna ukuphonononga ubudlelwane phakathi kokungcangcazela kwezixhobo zomculo kunye namanani.
Iinkqubo zokubala ngamanani zaseNtshona ziye zanda ukususela kwimihla yamandulo yasePythagoras. Ngoku zibandakanya iindlela zokubala amanani angundoqo abalulekileyo . Ezi ziquka inombolo yakho yendlela yobomi, inombolo karmic kunye neyakho inombolo yomnqweno womphefumlo . La manani enza itshathi yakho yokubala ngamanani. ukuba awukayiboni itshathi yakho yokubhula ngamanani, kecofa apha ukuze ufunde ngamanani asimahla.Uya kufumana amanani akho angundoqo wokubhula ngamanani kunye nendlela adibana ngayo ukwenza indlela yakho ekhethekileyo yobomi.
Ithetha ukuthini inombolo yesibongozo somphefumlo wakho?
Inombolo yakho yokukhuthaza umphefumlo inokutyhila eyona ntshukumisa iphambili emva kwayo yonke into oyenzayo .
Abanye abantu basenokuba nomnqweno wokufuna ubutyebi bezinto eziphathekayo. Bakufanelekele ukuba ziinkokeli kwezemali okanye kwezopolitiko. Ngeli xesha, abanye abantu banokuba nobizo lobuntu ngakumbi ebomini. Aba bantu bakhathala kancinci ngomsebenzi wabo, beqhutywa ngumnqweno wokunceda nokusebenzela abanye.
Ukwazi umnqweno womphefumlo wakho kunokukunceda khetha indlela enolwaneliseko olukhulu kunye nolonwabo . Inokukunika ukuqonda ukuba unjani njengeqabane lothando.
Ibalwa njani inombolo yomnqweno womphefumlo?
Ungabala inombolo yomnqweno womphefumlo wakho usebenzisa izandi zesikhamiso kwigama lakho lokuzalwa kunye netshati yokubhala ngamanani. Khumbula ukubandakanya nawaphi na amagama aphakathi. Eli nqaku licacisa indlela yokusebenzisa aumnqweno womphefumlo wokubala inani.
Ithetha ukuthini iNombolo yoMphefumlo 9?
Inani le-9 livela kwiinkcubeko ezininzi kunye neentsomi njengenani elibalulekileyo. Ngokomzekelo, kwiintsomi zamaNorse, inani lesi-9 linxulunyaniswa ne umlingo okanye ‘utshintsho’ ebomini. U-9 uneempawu zemathematika ezinomdla. Nantsi into onokuthi uyizame ekhaya!
Phinda-phinda naliphi na inani ngo-9 (yithi, 3 x 9= 27). Emva koko yongeza amanani avelayo. Ekugqibeleni, zinciphise zibe yidijithi enye. Uya kumangaliswa kukufunda ukuba idijithi yokugqibela ihlala iba yi-9 (2 + 7 = 9).
Inani u-9 lijongeka njenge-6 eguqulweyo kwaye kukho ukufana phakathi kwala manani mabini. I umnqweno womphefumlo inombolo 6 iqhutywa luthando novelwano ngakubo basondeleyo nabo babathandayo. 9, kwelinye icala, kunjalo eqhutywa luthando kunye nenkonzo kwihlabathi ngokubanzi.
Amaxabiso angundoqo omnqweno womphefumlo inombolo 9
Ukuba unomphefumlo wakho ukhuthaza inombolo 9, ngoko ke amaxabiso akho angundoqo ukungazicingeli, uvelwano kunye nengqiqo yehlabathi.
Ufuna ukwenza ihlabathi libe yindawo engcono.
Usenokuba nomdla ngamalungelo ezilwanyana. Okanye ukufuna iindlela zokuphelisa ubuhlwempu. Okanye ukusebenzela imfundo efanelekileyo kubo bonke abantwana. Ngamafutshane, izizathu zehlabathi ziyakukhuthaza.
Abantu abanomdla womphefumlo inombolo ye-9 babeka umsebenzi omningi kunye namandla izizathu zobuntu . Kungenxa yokuba ufumana intsingiselo kunye nokwaneliseka xa usebenzela abanye.
Ngelixa unomdla malunga nezizathu ezisondeleyo entliziyweni yakho, wenza yonke into ngelensi yothando. Ugxininise kwimvisiswano, awusebenzisi amandla. Kunoko, ufumana indlela yakho ngefilosofi kunye nokuthetha. Igcwele iinjongo, imali kunye namandla akukhuthazi. Kodwa ungangena kwisikhundla sobunkokeli kwaye ufumane ubutyebi. Oku kuya kuba yimveliso yezenzo zakho zobuntu.
Gcina ukhumbula ukuba amaxabiso akho aphambili aya kuphenjelelwa likamva lakho kunye namanani endlela yobomi. La manani edityanisiwe adala iplani esebenzayo yesakhono sobomi bakho.Ukufumana eyakho, cofa apha ukuze ufunde ngamanani asimahla.Iya kubala zonke iinombolo zakho ze-numerology kwaye ikunike ukuqonda kunye nokucaca.
Iindlela zomsebenzi zomnqweno womphefumlo inombolo 9
Ubugcisa kwaye uyilo imimoya ivuselela umoya wakho.
Ukulunge ngokufanelekileyo ukulandela ezi nkalo. Umsebenzi owukhethayo uya kuwufuna - ngandlela ithile- sikubeke kwinkonzo yabanye. Ngaphandle koko, uya kuziva ngathi kukho into enqongopheleyo.
Nje ukuba uphumelele ubuchule obuthile bokuyila okanye ubugcisa, uyakunandipha ukuyifundisa . Kungenjalo, unokugqiba ekubeni usebenzele imibutho yesisa. Usenokunqwenela ukulandela icandelo lezamayeza, nokuba ngugqirha okanye umongikazi. Unemvelo ebuthathaka nobuchule bemvelo bokudala uxolo. Ezi mpawu zikwenza ukuba ukufanelekele Psychology okanye iingcebiso .
Ukuba awusebenzi ekukhonzeni uluntu, unokuchitha ubomi bakho usukela ubulumko bokomoya. Nokuba yeyiphi na indlela oyikhethayo, i-charismatic, phantse amandla amagnetic we-9 aya kuba luncedo olukhulu kuwe. Abantu bayakuthanda nje ukuba kufutshane nawe! I-charisma yakho kunye nomoya wokuzincama uya kukunceda uqhubele phambili umsebenzi wakho.
Ubudlelwane bothando kumnqweno womphefumlo inombolo 9
Imbonakalo yomnqweno womphefumlo inombolo 9 igxile ekuncedeni ihlabathi.
Oku kunokubenza bangabi nankathalo ngandlel’ ithile xa kuziwa kwiqabane elisondeleyo okanye kubudlelwane.
Iminqweno yabanye abantu abasondeleyo kuwe inokungqubana neminqweno ye-9 yomphefumlo. Unobubele kwaye uphakamile. Awuzikhathazi ngemibandela encinci yengqondo yobomi bemihla ngemihla.
Abaqhubi bakho abaphambili yintanda-bulumko kunye nezizathu zobuntu. Ulapha ukuze uphakamise ukuqonda kwehlabathi jikelele. Ezi mpawu ngokuqinisekileyo zikwenza ube umdlalo onomtsalane.
Kodwa izenzo zakho ngamanye amaxesha zinokuwaphazamisa amaqabane akho obomi. Nokuba ufumana 'enye', kuya kukuthatha ixesha elide - mhlawumbi neminyaka - ukuya zivuleleke ngokupheleleyo kuloo mntu . Abanye abantu abasondeleyo kuwe banokuziva ngathi abamazi ngokwenene wena, nasemva kweminyaka bekunye nawe.
Abantu abanomnqweno womphefumlo inombolo 9 ingaba ngokweemvakalelo kakhulu . Ngamanye amaxesha unokuzifumana uphakathi kwezi zinto zimbini zigqithisileyo. Okanye ubambelele ebantwini. Okanye ukufuna ukurhoxa kwaye ushiywe wedwa ngokupheleleyo. Kufuneka uchaze olu buntu bumbini ‘kulowo,’ kungenjalo basenokucinga ukuba lityala labo!
Okulandelayo, bona ukuba ezi mpawu ziya kudlala phi indima ebomini bakho ngokufumana iprofayile yakho yokubhula ngamanani. Ngokuqwalasela onke amanani akho, uya kufumana amandla akho, iitalente kunye nezipho eziya kukunceda ugqwese ebomini.Cofa apha ukuze ufunde simahlakwaye ufumane amanani akho obuqu bokubhula ngamanani.
Ingozi yokudinwa ngokugqithiseleyo
Ubume bakho obunqwenelekayo bunakho kukwenza ube buthathaka.
Khumbula ukuba ayizizo zonke iimpembelelo ezintle njengezakho. Ngenxa yokuba utyalwe kakhulu kwizizathu ezinceda ihlabathi, wena inokukunika ixesha lakho elininzi.
Oku kunokuba yingozi kwimpilo yakho. Khumbula ukuba, nokuba usebenza nzima kangakanani na, ihlabathi liya kuhlala lifuna ukulungiswa. Ke qiniseka ukuba ukhaba emva kwaye jonga ‘inombolo yokuqala’ ngamaxesha athile.
Funda ngamanye amanani okukhuthaza umphefumlo
Umnqweno womphefumlo inombolo 1
Umnqweno womphefumlo inombolo 2
Umnqweno womphefumlo inombolo 4
Umnqweno womphefumlo inombolo 5
Umnqweno womphefumlo inombolo 6
Isibongozo somphefumlo inombolo 7
Umnqweno womphefumlo inombolo 8
Umnqweno womphefumlo inombolo 11
Isibongozo somphefumlo inombolo 22
Isibongozo somphefumlo inombolo 33
15 Iinyani ze-Leo: Funda ukukubona oku kuSayina kuKhanya olutsha
Isilwanyana soMoya weScorpio yinyoka; Kodwa Ithetha ukuthini kwaye Imele?